बलिउड सेलिब्रेटी कस्को हाइट कति ? को अग्लो को होचो ?
गफगाफ - बलिउडका थुप्रै सेलिब्रेटी छन् जसका नेपालमा पनि निकै ठुला समर्थक तथा फ्यानहरु छन् । फ्यान तथा समर्थकहरु सामाजिक संजालबाट आफना मन पर्ने सेलिब्रेटीहरुको बारेमा जानकारी लिई रहेका समेत हुन्छन् । फ्यानहरुलाई आफ्ना मन पर्ने सेलिब्रेटीहरुको नयाँ-नयाँ कुरा थाहा पाउन समेत लागेको हुन्छ । तसर्थपनि आज हामीले तपाईहरुका लागि बलिउडकाका केहि चर्चित सेलीब्रेटीहरुको कसको उचाई कति भन्ने जानकारी गराउन लागेका छौँ ।
अमिताभ बच्चन भन्ने बित्तिकै हरेक फ्यान तथा समर्थकहरुलाई उनकै चलचित्र 'सोले' को झट्ट याद आई हाल्छ । सोले लगायत उनका सयौ बढी फिल्महरु छन् जसलाई फ्यान तथा दर्शकहरुले निकै मन पराएका थिए र अझैपनि उनको फिल्मको राम्रै माग हुने गर्छ । हाल चर्चित भारतीय रियालिटी शो 'कौन बनेगा करोडपति' मा ब्यस्त रहेका अमिताभको हाईट ६ फिट १५ इन्च रहेको छ
अामिर खानले प्राय सबै खालका चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् । अामिरले चलचित्रमा अभिनय गर्न बाँकी कुनै त्यस्तो विधानै बाँकी छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला । नाम जस्तै काम पनि भएका आमिर एक सामाजसेबी समेत हुन् । उनै आमिरको हाइट ५ फिट ५ इन्च रहेको छ ।
थुप्रै सफल फिल्ममा सफल अभिनय गरेका शाहरुख खान बलिउडका सफल खान नायक मध्येका एक हुन् । आफ्ना सुरुवाती चरणका फिल्महरुबाटनै दर्शक निकै मन जितेका शाहरुखले अभिनय गरेका प्राय सबै फिल्महरु सफल नै भएका छन् । उनै शाहरुखको ५ फिट ७५ इन्च रहेको छ ।
सलमानले अभिनय गरेको फिल्महरुले प्रदर्शन अगाबै राम्रै चर्चा पाउने गर्छ । सुगठिलो शरीर र अभिनयको कारणले बलिउडमा सबै भन्दा बढी फ्यान फ़्लोइङ् भएका सलमानको फ्यान नेपालमा पनि थुप्रै छन् । सलमानको फिल्म प्रदर्शन हुदा नेपाली फिल्म पनि प्रदर्शनमा आयो भने पनि उनकै दबदबा रहने स्थिति समेत देखिने गरिन्छ । सलमानको हाइट भने ५ फिट ६ इन्च रहेको छ ।
सलमान पछी कुरा गरौ दीपिका पादुकोणको बारेमा ।
बलिउड चलचित्रमा मात्र नभएर हलिउडमा पनि काम गरिसकेकी गायिका एबम नायिका हुन् प्रियंका चोपडा । प्रियंकाको हातमा पछिल्लो केहि बर्ष यता बलिउड का सिमित फिल्म मात्र परेता पनि एकाद चलचित्रले बाहेक अन्यले आशा गरे अनुसारको सफल भएको छैन भन्दा फरक नपर्ला । केहि समय अघि देखि बैबाहिक चर्चा भैरहेको प्रियंकाको हाइट ५ फिट ६५ इन्च रहेको छ ।
बलिउडमा इन्ट्री मारे लगत्तै निकै चर्चामा पुग्न सफल नायिका हुन् कट्रिना कैफ । कट्रिनाको चर्चा उनको अभिनय दखलता, सुन्दरता साथै अभिनेता सलमान खान संग नाम जोडिने जस्ता बिबिध कुराले रह्यो । उनि अभिनित फिल्म पहिलाको तुलनामा अलि कम नै आएको छ । कुनै समय सलमान खान संग जोडिने कट्रिनाको नाम अर्का नायक रणबिर कपुर सँग पनि जोडिने गर्छ । कट्रिनाको हाइट ५ फिट ८ इन्च हो ।